ရုပ်ရှင်များ - iHorror
by admin ရဲ့ ဇန်နဝါရီလ 17, 2018
iHorror သည် အကောင်းဆုံး ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ရုပ်ရှင်သတင်းများ၊ နမူနာများနှင့် သုံးသပ်ချက်များအတွက် သင့်ထိပ်တန်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက် ဇာတ်ကားများမှ ကြောက်စရာကောင်းသော ရုပ်ရှင်များ၊ ဂန္တဝင် အင်ဒီသရဲဇာတ်ကားများအထိ အရာအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ အကျုံးဝင်ပါသည်။ လူတွေမြင်ချင်နေတဲ့ Horror ကို မျှဝေပါတယ်။
by ဂျိမ်းဂျေး Edwards က မေလ 17, 2022
Hey Tightwads! It’s Tuesday again, and that means free movies from iHorror! And here they are… Bloody Murder Bloody Murder isastraight-to-video flick …
'Torn Hearts' ဒါရိုက်တာ Brea Grant သည် Fist Fights နှင့် Southern Hospitality
မေလ 17, 2022
by ကယ်လီ McNeely မေလ 17, 2022
'Predator' Prequel 'Prey' သည် ပထမဆုံး Tense Trailer ကို ရရှိသည်။
by Trey Hilburn III ကို မေလ 16, 2022
'Resurrection's' Trailer သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဖြစ်သည်။
by Trey Hilburn III ကို မေလ 14, 2022
'The Andy Baker Tape-' 'Creep၊' သို့သော် ၎င်းကို ညစာစားရန်၊ Drive-ins နှင့် Dive လုပ်ပါ
by Brianna Spieldenner မေလ 14, 2022
'The Beast Comes at Midnight'- ဒါရိုက်တာနဲ့ Small-Town Werewolves စကားပြောခြင်း။
by Brianna Spieldenner မေလ 13, 2022
နောက်ဆုံးထွက် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ဇာတ်ကားနမူနာများ။
အမြည်းဇာတ်ကားများကို လူတိုင်းနှစ်သက်သည်။ နောက်ဆုံးထွက်နှင့် အကောင်းမွန်ဆုံး ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်နမူနာများဖြင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို ဆက်လက်ရယူပါ။ ပြဇာတ်ရုံမှထွက်ရှိလာသည့် ကြောက်စရာကောင်းသော တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသည့်ရုပ်ရှင်များအထိ၊ သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖြည့်ဆည်းပေးထားပါသည်။
မေလ 16, 20220မှတ်ချက်
'စုဆောင်းသူ' ဒါရိုက်တာ Marcus Dunstan သည် 'လူမဆန်သော' ဖြင့် Blumhouse အတွက် Chemical Attack Gorefest ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
by Trey Hilburn III ကို မေလ 13, 2022
'Escape the Field' Trailer သည် Cornfield တွင် သူစိမ်းခြောက်ယောက်ကို ဖုံးအုပ်ထားသော လူသတ်သမားများက တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် သုတ်သင်ရှင်းလင်းနေသည်
by Trey Hilburn III ကို မေလ 9, 2022
'Shark Bait' အပိုင်းအသစ်တွင် လူသား၏ခြေထောက်များကို Chum အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၏ အင်္ဂါရပ်များ
The Andy Baker Tape,anew found footage horror movie, opened the Unnamed Footage Festival’s 12-hour livestream, and combined the juicy elements of Patrick Brice’s …
ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာရုပ်ရှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း- The Innocents
by Asher Luberto မေလ 7, 2022
ဧပြီလ 3, 2022
ဧပြီလ 2, 2022
အမည်မဖော်လိုသော ရုပ်ရှင်ပွဲတော် မှတ်တမ်း- ပွဲတော်၏ အကောင်းဆုံး
by Brianna Spieldenner မတ်လ 29, 2022
'Wesens' သုံးသပ်ချက်- ဤကဲ့သို့ ဂြိုလ်သားရုပ်ရှင်ကို သင် မမြင်ဖူးပါ။
by Brianna Spieldenner မတ်လ 28, 2022